“Alatsinainy mainty” : miandry sy manantena fanonerana ireo tra-pahavoazana | NewsMada
“Alatsinainy mainty” : miandry sy manantena fanonerana ireo tra-pahavoazana
Valo taona izay ny “Alatsinainy mainty”. Tsy fantatra ihany izay atidohabe… Miandry sy manantena fanonerana ireo tra-pahavoazana.
Mandeha ny fotoana… Valo taona izay ny “Alatsinainy mainty”: 26 janoary 2009, nisian’ny fandrobana sy fandoroana orinasa aman-tranombarotra faobe. Nanomboka tamin’ny haino aman-jerim-panjakana, RNM sy TVM, teny Anosy izany; niitatra tamin’ny radio sy televiziona MBS an’ny filoha teo aloha, Ravalomanana, teny Anosipatrana.
Tsy ahoan-tsy inona teo, nanenika ny tranombarotra lehibe teny Tanjombato izany. Tonga teny Ankorondrano, Analakely, Behoririka… Tratra koa ny tany Antsirabe, Fianarantsoa, Toamasina, Toliara, Antsiranana… Niaiky ny rehetra fa efa voaomana mialoha iny: nitovitovy ireo tranombarotra norobaina, ny fisehon’ny fandrobana, niara-niainga.
Lehibe ny fahavoazana
Lehibe ny fahavoazana tamin’ny “Alatsinainy mainty“, fa mety tsy araka izay noheveran’izay nikotrika sy nanatanteraka azy. Na tsy misy aza ny tarehimarika ofisialy: ampolony maro ireo namoy ny ainy sy tsy hita popoka, anarivony ireo very asa, anjatony ny rava fananana… Eo ny fatiantoka ara-toekarena amina miliara maro.
Politika ny raharaha, heverina ho vitavita sy tsy hitahita ho azy amin’izao. Tsy fantatra ny marina, tsy hadihadiana. Ahoana àry no hirosoana amin’ny hoe fampihavanam-pirenena, raha tsy fantatra ny marina: iza no nanao inona, oviana ary taiza? Eny, na ny fanonerana ireo niharam-pahavoazana aza, sarotra raha tsy fantatra ny marina.
Hisy ve izay famoahana ny marina izay amin’ny fampihavanana hohetsehina indray ato ho ato? Miandry sy manantena fanonerana ireo tra-pahavoazana, arakaraka izay mety ho fanapahan-kevitra ny vaomiera momba izany eo anivon’ny Filankevitry ny fampihavanana malagasy (FFM) amin’ny endrika vaovao hijoro eo.
Ny vahoaka no tena tra-pahavoazana
Ny amin’izay hoe fanonerana izay, tsy ny vahoaka ve no tena tra-pahavoazana? Mbola izao ao anaty fahantrana lalina sy maharitra izao, fa natao fitaovana politika sy tohatra fiakarana… Mila fantarina ny marina: hisorohana izay azo sorohina, hialana amin’izay azo ialana amin’izay tena fanetribem-pirenena sy mpanapotika ny fiainam-bahoaka…
Na eo sy hoe hatao aza ny fampihavanam-pirenena, mila fantarina sy hampahafantarina ny vahoaka ny marina. Mba tsy zohy fieren’ny jiolahy ny fampihavanana, na eo aza ny famelan-keloka.